Wararka Maanta: Arbaco, Jan 2 , 2013-Tirada iyo Dhaqaalaha Soomaalida ku nool Gobolka Minnesota ee Mareykanka oo Korortay 12-kii sano ee lasoo dhaafay
C/raxmaan Kaahin oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa BBC-da u sheegay in qiyaasta la sameeyay lagu sheegay in Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ay hadda tiradoodu ka badan tahay 50,000 oo qof, halka sannadkii 2000 ay ka ahaayeen 18,596-qof, waxaana tani ay caddeyn u tahay inay laba jibaarantay tirada Soomaalida ku nool Minnesota.
“Warbixinta waxaa lagu sheegay in 40% ay Soomaalida soo galootiga ah leeyihiin ganacsiyada yaryar ee ka furan Minnesota, dhaqaalaha ay sannadkii gobolka soo geliyaanna uu gaarayo 12-bilyan oo doollar,” ayuu yiri Kaahin.
Gobolka Minnesota ayaa la sheegay inuu noqday gobolka ugu dhaqaalaha badan dalka Mareykanka oo xiligan ay ka jiraan xaalado dhaqaale oo aad u daran, waxaana Soomaalida ku nool gobolkaas ay u badan yihiin kuwo ku shaqeysta dukaamo, qaarkoodna ka shaqeeya warshado ku yaalla gobolkaas.
“Dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxay noqdeen qowmiyadda saddexaad ee ku nool Minnesota, iyadoo ay ka horreeyaan oo keliya Meksikaanka iyo dadka loo yaqaan Mow oo ka yimid Aasiya,” ayuu yiri Kaahin oo intaas ku daray in arrintan ay layaab ka dhigtay in Soomaalida oo wax ka yar 20-sano ku nool dalka Mareykanka ay noqdaan qowmiyadda saddexaad ee gobolkaas ku nool.
Dhanka kale, Kaahin oo isaguba ah ganacsade ayaa sheegay in tani ay u soo jiidday Soomaalida ku nool gobolkaas ammaan weyn, wuxuu xusay in afar suuq oo waaweyn ay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Minneapoli, kuwaas oo ay dadka Soomaalida ka iibsadaan wixii ay u baahan yihiin.
Gobolka Minnesota ayaa noqonaya gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalka oo tiradoodu ay ka badan tahay boqolaalka kun ee qof, kuwaasoo xilliyo kala duwan tagay dalkaas.